Soo dejisan Driver Booster 4.0.4 – Vessoft
Soo dejisan Driver Booster
Cusbooneyn Driver – software ah u baadhi degdeg ah iyo warsiinta wadayaasha. Software ayaa baaritaanku nidaamka, si toos ah xogaha ku saabsan darawallada iyo u saamaxaaya in ay ka soo dejisan ama u cusbooneysiin. Cusbooneyn Driver kuu ogolaanaya in aad si aad u cusboonaysiiso wadayaasha ah ee qaybaha kala duwan ee computer iyo qalab dibadda. Software ayaa sidoo kale awood u reserved darawallada in la kordhiyo waxqabadka ciyaaraha. Cusbooneyn Driver kuu ogolaanayaa inaad your computer ka baaqsadey hardware iyo nidaamka colaadaha ilaaliyo.
Search Quick oo update ah darawallada
Updates wadayaasha ee ka kooban iyo qalabka dibadda
Wanaajinaysaa qaab kulan
Driver Booster Software la xiriira:
Wadayaasha Software in la gaarsiiyo versions darawalka dhacsan ama dhaawac oo ka mid ah nidaamka iyo codsiyada kala duwan. Sidoo kale software awood u siineysaa inay gurmad darawallada u gaar ah.
English, Français, Español, Deutsch... GOM Media Player 2.2.77.5240, 2.2.69.5228 iyo 2.2.73.5235
English, Español, 中文, 日本語... Tixati 2.47 Standard iyo Portable
English, Українська, Français, Español... Line 4.10.0.1237
English, Español, 中文, 日本語... AutoIt 3.3.14.2
Saxannada Ku haboon qalab ay tayadoodii iyo hagaajin xasiloonida nidaamka. Software ayaa u ogolaanaya in ay defragment ka cajaladaha adag iyo abaabulo faylasha.
Wise Registry Cleaner 9.31 Standard iyo Portable